Ngosipụta na Storelọ Ahịa Apple na San Francisco megide omume ọjọọ gọọmentị | Esi m mac
Ngosipụta na Storelọ Ahịa Apple na San Francisco megide omume ọjọọ gọọmentị
N'oge ụnyaahụ ngosipụta nke "Ọgụ maka Ọdịnihu" kwalitere na ịgbachitere ikike na ohere na ntanetị, ebe onye nchoputa ya Holmes Wilson gbasoro agha ogologo oge nke Apple megide gọọmentị na-azụchi ọnụ ụzọ ruo oge ụfọdụ, mana agbanyeghị iwu ụlọ ikpe na Tuesday mere ka ụlọ ọrụ ahụ nye ozi nzuzo maka nchọpụta FBI na-aga n'ihu.
Maka nke a, Wilson nyere aka ịhazi otu obere ndị ngagharị iwe n'ihu thelọ Ahịa Apple na San Francisco, nke ji iPhones dị n'aka ha na ihe mmado nke gụrụ "Anaghị m ekwenye na nyocha na ngwaọrụ a." Nke a bụ ngosipụta doro anya nke nkwado maka gọọmentị ka gọọmentị “ghara ịdọpụ” ya ma wụnye ụzọ na ngwanrọ ya.
Dị ka Wilson si kwuo, ihe na-amalite dị ka nsogbu nchebe bụ isi nwere ike ịghọ oge. na nnukwu nsogbu nchekwa intaneti.
Dika anyi gwara gi na ntinyeNa Tuesday, onye ọka ikpe gọọmentị etiti nyere Apple iwu ka ọ nyere FBI aka akpọchi ihe iPhone 5c echekwabara okwuntughe Nsogbu bụ na arịrịọ a chọrọ Apple ka ọ mepụta sọftụwia pụrụ iche ka ọ gafee uzo nke anwapụta okwuntughe na IOS 9, wee hapụ ngwaọrụ ahụ oghe maka mwakpo ọjọọ dị egwu na nke a ga - eji mee ihe maka ebumnuche ọ bụghị "Iwu".
Kpebe arịrịọ a, Tim Cook kwupụtakwara na weebụsaịtị Apple n'oge awa ole na ole gachara:
Ruo ugbu a, anyị emeela ihe niile ike anyị na n'ime iwu iji nyere aka. Mana ugbu a gọọmentị United States arịọla anyị maka ihe anyị na-enweghị, yana ihe nwere ike ịdị oke egwu iji mepụta. A gwara anyị ka anyị wuo ụzọ azụ maka iPhone.
Thetù FFTF na-ezube ime emume ihe ngosi ndị ọzọ na Tuesday na-esote na Applelọ Ahịa Apple dị iche iche na US niile na ikekwe na mba ndị ọzọ na mba ọzọ na agbanyeghị na enweghị ike gbanwee mkpebi a, opekata mpe ha jikwaa ime ka ọha na eze mara ihe na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ngosipụta na Storelọ Ahịa Apple na San Francisco megide omume ọjọọ gọọmentị
Akụkọ na-aga n'ihu na-abata na tvOS, oge a bụ nlele vidiyo maka ngwa